Colton Haynes naJeff Leatham vadzoka - Nhau
Colton Haynes naJeff Leatham vadzoka pamwedzi mishanu mushure mekunyora kurambana
Colton Haynes naJeff Leatham vadzoka!
Mwedzi mishanu mushure kuendesa kurambana , vaviri vacho vanoita kunge vayanana.
Musi waGumiguru 28, vaviri vacho vakatora Instagram kuti vatumire mutero kune mumwe nemumwe pagore ravo rekupemberera.
'Haugone kutenda kuti yatove 1 yr. kubvira patakaroora @jeffleatham Happy Anniversary murume wangu akanaka, 'Colton akarondedzera akateedzana mafoto kubva kumuchato wavo.
Jeff akatumira mifananidzo mitatu kubva kumuchato, achinyora mifananidzo ine nhetembo kubva kuna R.M. Drake.
phaedra mapaka uye apollo nida kurambana
'Handikwanise kurangarira zvainge zvakaita pamberi pako, uye handitozive kuti takasvika sei pano asi pamwe ndizvo chaizvo zvandaida,' nhetembo yacho yakaverenga. 'Mumwe munhu angaite kuti ndikanganwe kwandakabva uye mumwe munhu aigona kundiita rudo ndisingazive kudonha.'
Iye akabva awedzera, 'Anofara Anniversary Yangu Akanaka Murume - Hupenyu inzvimbo yakanaka newe padivi pangu. - NDINOKUDA.'
Kwekupedzisira Chivabvu, mutambi we'Teen Wolf 'akamhan'arira kurambana naJeff, murongi kune nyeredzi.
Kufaira kwakauya mwedzi mitanhatu chete mushure mekunge vaviri vacho vasunga pfumo pamuchato wekunyepedzera muPalms Springs yaisanganisira Jesse Tyler Ferguson, Sofia Vergara, Billie Lourd naJoe Manganiello. Yakanga ichitarisirwa naKris Jenner.
nick cannon 2 miriyoni emadhora bhutsu
Sezvo nhau dzekuparadzaniswa yakaparadzirwa kutanga kwegore rino, saizvozvowo makuhwa asina kutsigirwa pamusoro pechikonzero. Vazhinji vakatoshamisika kana Jeff aive asina kutendeka, vachidudza mazwi kubva murwiyo rwaColton, 'Man It Sucks,' zvinoreva hukama hwedivi rimwe.
'Jeff aisazombobiridzira,' mutambi wacho akanyora pa Twitter, achibvisa mweya. 'Iye murume anoshamisa. Ndapota rega kuva nehasha kwaari. Rwiyo rwandakanyora rwaive rwehukama hwekare. '
Bachelor exes Nick Viall naVanessa Grimaldi vanosangana zvakare mushure mekurambana
Mary J. Blige anoda murume anoita mari yakawanda kupfuura iye
lino facioli mutambo wezvigaro zveushe
vangani vanhu vari mu ellens vateereri
ko phaedra akati kudii nekandi
miranda lambert akaita zvekudanana
scott disick udza bhuku rese
paul teutul sr mota muunganidzwa